Ahoana ny fomba fanamboarana backup an'ny IMEI an'ny Android | Androidsis
Francisco Ruiz | | Android Root, Fampiharana Android, fiarovana, Tutorials
Tamin'ny lesona fampiharana hafa izay nataoko taloha kelin'izay, nampianariko ianao tamin'ny TWRP Recovery, ny fomba hamerenanao ny folder EFS, na inona no mitovy, a backup ny IMEI an'ny terminal Android anao hiambina mora foana ary hamerina azy io raha sanatria very IMEI.
Amin'ity indray mitoraka ity dia hanazava ny dingana mitovy aho tsy mampiasa ny fomba fanovana novaina, amin'ny terminal misy miorim-paka ihany ary rindranasa maimaim-poana izay azontsika sintonina mivantana avy amin'ny Google Play Store dia hanana mihoatra ny ampy isika.
Ny fangatahana resahina dia mamaly ny anaran'ny EFS ☆ IMEI ☆ Backup Ary araka ny nolazaiko anao dia ho afaka hanafaka azy tanteraka amin'ny fivarotana fampiharana Google ofisialy ho an'ny Android izahay.
Fa maninona no manana backup na backup an'ny IMEI an'ny terminal Android-anay?
Ny backup na backup ny IMEI an'ny terminal Android anao Ilaina tanteraka izany, indrindra ho an'ireo mpampiasa rehetra izay maniry ny hanandrana Rom vaovao masaka na hametraka seranan-tserasera amin'ny alalàn'ny fanarenana novaina voalaza etsy ambony. Ny IMEI an'ny terminal Android anay dia ao anaty folder na fisarahana amin'ny rafitra antsoina hoe EFS izay hita amin'ny toerana samihafa, miankina amin'ny marika na maodelin'ny terminal Android.
Amin'ny terminal Samsung ity folder ity dia fizarazarana iray izay miorina mivantana eo ny fototry ny rafitra, na eo amin'ny terminal aza toa ny LG na Sony dia miova ity toerana ity. Ianaro ny fomba jereo ny IMEI amin'ny Samsung amin'ny rohy nandao anao fotsiny aho.
Ny kopian'ny backup an'ny IMEI amin'ny terminal Android anao dia ilaina ny manao azy satria raha sendra very ny angon-tsika na mamafa azy dia tsy ho afaka hisoratra anarana amin'ny tamba-jotra finday eto an-tany isika, mamela ny fitaovantsika tsy hampiasaina amin'ny resaka fifandraisana data, antso ary hafatra.
Con EFS ☆ IMEI ☆ Backup ho vitantsika ny manatanteraka a Backup IMEI ny Android avy amin'ny interface tsotra an'ny rindrambaiko ary amin'ny alàlan'ny fanindriana bokotra tsotra fotsiny, farafaharatsiny ao amin'ny terminal Samsung, amin'ny terminal hafa dia ilaina ny miditra amin'ny safidy Backup Partitions ary misafidy ny fizarazarana EFS avy eo.
Ahoana no ahafahanao manamarina amin'ny sary etsy ambony, ankoatry ny anananao ny mety manaova backup amin'ny IMEI an'ny Android, manome antsika safidy koa ny hisafidy famatrarana na hanao a backup raha misy fizarazaran'ny rafitra ny fisie avy amin'ny Android.
Fampiharana tena mahaliana izay avy eto Androidsis Manoro hevitra anao izahay, ary izany dia Tsy mandany vola ny fanasitranana tena amin'ny fahasalamana mba tsy hanenenantsika any aoriana, indrindra ireo mpampiasa ROOT sy ireo izay manolo-tena hampiasa finday amin'ny Android.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Tutorials » Android Root » Fomba fanamboarana ny IMEI an'ny terminal anao mora foana [Mpampiasa ROOT]
arieltr dia hoy izy:
Tena ilaina, misaotra Francisco.
Mamaly an'i arieltr
Misaotra, antenaiko fa tsy mila mamerina azy ireo intsony aho: 3
Valiny tamin'i José Angel
Ahoana ny fananana ny Windows Taskbar sy Start Menu amin'ny Android